You are here: Home Sheekooyin Qolka Fadhiga: Sheeko gaaban
Kuma badna habeennada uu fadhiisto qolka fadhiga, waxase u caado ah inuu tago uun habeenka dan iyo damac ku jiro. Habeennada xaalku ku cakiran yahay ayuu iskula faqaa. kuna maaweeliyaa nafta sidii oo uu filim daawanaayo oo kale. Mar kasta oo uu tago qolkaasi waxa uu dareemaa nafis rabaanni ah. Waxaannu u haystaa qolkaasi inuu yahay meesha keliya ee isaga iyo naftiisa u gar qaadda. Waxa kale oo uu maanka ku hayaa in uu yahay qolkaasi, meesha ugu fiican ee ay tahay in lagu qaato wakhti, marka xaalka noocaasi oo kale ahi jiro. Qaabka iyo dhismaha qolkani waxa aad is odhaneysaa waxa loo sameeyey markii horeba in xaalad kacsan uu dejiyo. Qalabka iyo agabka kale ee yaallaana waxa uu u bilan yahay si aad ku raaxaysaneyso.
Caawase qolku qolkii ma aha oo wax weyn ayaa ka si ah. Waxa uu fahmi la’yahay inaanu caawa qolkani nafis soo wadin ee uu kaba sii daraayo xaalka uu ku sugan yahay. Awal neecaw macaan iyo jawi fiican oo uu qolkani lahaa ma laha. Sida uu iskugu dhex daadsan yahay, iyo muuqaalka uu leeyahay caawu, waa mid dadka hore u yaqaannaa ay diidayaan, qofka ku cusubise aannu dhibsaneynin. Hayeeshee, waxase kaba sii daran in aanu caawa isagu laftigiisu sii jecleysaneynin inuu ku sii nagaado qolka. Habeennadii hore hadduu ahaan jirey wehelka keliya ee ay rafiiqa yahiin, caawa waxa u garan laayahay meesha sartu ka qudhun tahay. Inkasta oo xaqiiqada jirtaa tahay, in qolku uu sidiisii yahay ee waayaha caawa jiraa uu ka duwan yahay waayo, iyo dhacdooyin hore ugu soo marey goobtan.
Haddii wakhtiyada qaarkood, ay ku qaadan jirtey, muddo kooban, xalka arrinta uu u tagey qolkan, caawa, iska daa xal e’, waxa uu maareyn kari la’yahay go’aannada iska soo daba dhacaaya ee naftiisu hadba meesha keeneyso. Kaasi qaado. Mayee ka daa, haddana kaasi qaado, mayee ka daa,. Waxa naftiisu u faqeysaa si xawli ah, oo dareennada jidhkiisu wada shaqeynaayaan. Mar dambe oo uu daaley ayuu nafta u sheegey in arroorta khudbada iyo kalahaadda sugeysaa aanney u saamaxeynin inuu ku sii nagaado qolkan. Wakhti xeedho iyo fandhaal kala dhaceen ayuu goosanayaa inuu sariirtiisii uu jeclaa iska dul tago.
Isaga oo daal, iyo caajis badani ka muuqdo, oo la moodaayaba inuu xanuunsanaayo ayaa uu isku dul tuurey sariirtiisii. Sariirtii ayaaba haddan kaga darnaatey qolkii uu ka cabanaayey, jiif iyo joogba waa qaban la’yahay, waxa keliya ee uu caawa ugu jeclaan lahaa inuu hurdo iyo wax illawsiiya helo dhacdooyinka sida xawliga ah ugu socda. Markii uu gami’ waayey ayaa waxa uu xasuustey sheeko uu habeen, habeenkaasi ka horreysey uu ka akhrinaayey barta facebook-ga. Sheekadaasi oo xiisa lahayd, waxa ay ahayd nin ay saaxiibo dhaw yihiin oo soo galiyey ogeysiin ah, qofka doonaya inuu wax ilaabaa waxa ay tahay inuu sameeyo ama yeello. Inta uu sheekadaasi xasuustey oo qosol aad mooddo in leyska keen keenaayo muujiyey ayuu goor aan goor aheyn iska seexdey.
Subaxdii waxa u is-weydiinaayey dhacdaddii xalay, sida ay ahayd, waxaannu kala garan waayey saameynta dambe ee ay yeelan doonto, waxa uu ka sii baqanayaa caawana in sidii oo kale ku dhacdo. Waxase uu goostey haddii sheekadii xalay dhacdey uu wakhtigu caawana la yimaaddo inuu sameeyo casharkii uu ka bartey saaxiibkiisii facebook-ga, si uu u dareemo, wax kasta oo dhacdooyinkaasi illawsiinaaya.